125 arday Soomaaliyeed ah oo loogu deeqay waxbarasho Jaamacadeed – Radio Muqdisho
125 arday Soomaaliyeed ah oo loogu deeqay waxbarasho Jaamacadeed
Arday Soomaaliyeed oo ka qalin jebisay dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga Dahdhaab ayaa loogu deeqay waxbarasho Jaamacadeed oo gudaha Kenya ah.
Ardayda oo ka kooban 125 arday, isuguna jira wiilal iyo gabdho ayaa waxa waxbarasho jaamacadeed oo Kenya gudaheeda ah ugu deeqday Hay’adda DRC ee dalka Denmark.
Abshiro Xasan Cumar oo ah guddoomiyaha dhallinyarada xerada qaxootiga Xagardheer, ayaa sheegtay in deeqdani aysan dabooli karin baahida waxbarasho ee ka jirta xeryaha Dhadhaab.
Waxeey ka codsatay hey’adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga Dhadhaab inay deeq waxbarasho iyo tababarro u fidiyaan ardayda ka baxday dugsiyada sare ee qaxootiga ee aan awoodin inay sii wataan waxbarashada.
Sidoo kale waxay tilmaantay inuu halis ku jiro mustaqbalka ardayda ka baxda dugsiyada waxbarasho ee xeryahaas, ayna u baahan yihiin deeq waxbarasho iyo tababarro u sahli kara inay yeeshaan xirfado ay ku maareeyaan noloshooda.
Ardayda heshay deeqda waxbarasho ayaa u mahadcelisay hay’adda ay ka heleen ee DRC, oo iyadu kafaala qaadday waxbarashada jaamacadeed ee ardaydaasi, waxeyna hey’addu u qeybin doontaa Jaamacadaha ku yaalla dalkaasi Kenya.
Burcad badeed xeebaha Soomaaliya ka qabsatay laba Markab oo laga leeyahay dalka Iran